Tenga Uchitengesa Bitcoin Cash Kuti Ufare Bitcoin Cash Sports Betting
Zvakafanana nekutanga nemamwe maitiro e cryptocurrency, unofanira kuziva kutenga uye kutengesa Bitcoin Cash (BCH) usati watanga kuishandisa. Pamberi pechinhu chipi nechipi, iwe uchada zvinotevera: Bitcoin Cash chikwama, mutengesi wakatendeseka kana shanduko inobata vashandi veBitcoin Cash, uye zvechokwadi, kunzwisisa kwakasimba kwe chii chinonzi Bitcoin Cash.
Kutenga Bitcoin Cash
Nzira inokosha yekutenga Bitcoin Cash inowanzobatana nekugadzira kambani nekunyora ne email, kuongorora akaunti yako, kuisa mari munhoroondo, nekushandisa mari iyo kutenga BCH. Aya maitiro anowanzoramba akafanana kune ose mapuratifomu.
Paunenge iwe wagadzira account neako akasarudzwa Bitcoin Cash kuchinjana, unogona kungoisa yekutenga odha. Basa rekutsinhana nderekufananidza yako yekutenga odha nekutengesa maoda. Izvi zvinoreva kuti saiti inoenderana nemutengo wako wekubvunza nemutengo wevatengesi - kana kuwana mutengo unovhara kumutengo wako wekubvunza. Mushure mekutsinhana kwekutsinhana kwekutengesa uye iwe wasimbisa kutenga, zvese zvaunofanirwa kuita kumirira kuti BCH ipiwe iyo Bitcoin Cash chikwama adzorere iwe wakapa.
Kutengesa Bitcoin Cash
Panguva iyi, kana iwe uchida kutengesa Bitcoin Cash, iwe unofanira kutamba basa revatengesi mukutsinhana. Zvakare, iyo nzira inobatanidzwa inokosha, zvinoreva kuti kunyange vatengesi venguva yekutanga vanogona kutora nguva yacho pakarepo.
Kufamba kune nzira yekutengesa, iwe kutanga unofanira kuratidza mutengo wokutengesera weBitcoin Cash makobiri yako pachikuva. Nzvimbo yacho inoshandisa kutsvaga mutengi weBCH yako. Zvisinei, izvi hazvisi nguva dzose sezvo vamwe vatengesi vanogona kutenga zvakananga Bitcoin Cash yako kana chero imwe sarpto yemari iyo shanduro inogona kutsigira.
Ratidza nzira yako yekubhadhara yakasarudzika yeBCH yako uye omirira kugoverana kushandise mutengesi. Nguva iyo inotora kuti mutengesi kupedzisa ichasiyana kubva kune imwe shanduro kuenda kune imwe.
Kutsvaga shanduro yakanaka kutenga nokutengesa Bitcoin Cash
Kuti utenge uye utengese Bitcoin Cash usingapfuuri mune chero matambudziko, zvakanakisisa kana iwe ukachengetedza bhizinesi reBitcoin rakavimbika. Pane humwe unhu hwaunogona kutarisa, kusanganisira zvinotevera: kuwanikwa kwemaitiro ekubhadhara, nguva dzekutengesa, uye mukurumbira.
Chokutanga uye chakakosha, nzira dzokubhadhara ndiyo imwe yaunofanira kugara uchiziva. Iva nechokwadi chokuti shanduro inotsigira nzira dzakawanda dzekubhadhara dzakadai sekwereti nemadhikiti ekubhadharisa, PayPal, uye mamwe maviki anozivikanwa. Pachinyanya kukosha, shanduro inofanira kunge yakagadzirirwa nzira yako yekubhadhara inowanikwa nyore nyore.
Pfungwa yechipiri yekutarisa inofanira kunge iyo nguva inotora kuti kugoverana kupedzisa mutengesi. Kukura kwepamusoro yevhesi kunogona kuita kuti kutengesa nguva uye kukurumidza kushandiswa kunofanira kugara kuri pamusoro pezvenyu. Kuti uone izvi, iwe unogona kuisa mari shoma, asi maBCH mashomanene, uye uzvibvise pakarepo. Izvi zvinofanira kukupa pfungwa yekuti zvinotora nguva yakareba sei kutengesa kuita izvo zvaunoda.
Pakupedzisira asi kwete zvishoma, kuchinjwa kunodavirwa kunogona kufamba nenzira yakareba. Zvakanaka nguva dzose kutsvaga mupiki anorumbidzwa kuti ave nechokwadi chokuti iwe neBCH yako mune maoko akachengeteka.